Amabinzana kaDaniel Lacalle: Amabinzana akhe angama-35 abalaseleyo kwaye ungubani | Ezezimali
UDaniel Lacalle Quotes
IClaudi Casal | 29/07/2021 09:00 | Uqoqosho ngokubanzi
Akunyanzelekanga ukuba uphile eWall Street ukuze ube yingcali yezoqoqosho ekhokelayo kwaye udlulise ubulumko bakho. Oku kuboniswa ngamabinzana kaDaniel Lacalle, Umkhuseli wezoqoqosho waseMadrid wenkululeko yezoqoqosho. Ngaphandle kokungabi ngomnye wabantu abazizityebi emhlabeni, unezifundo ezaneleyo kunye namava amenza ukuba abe yingcali enkulu kwicandelo.
Kweli nqaku sidwelise amabinzana angama-35 awona alungileyo kaDaniel Lacalle kwaye siza kuthetha ngebhayiloji yakhe ukuze sandise ulwazi lwethu ngalo mbandela.
1 Iingcaciso ezingama-35 ezilungileyo zikaDaniel Lacalle
2 Ngubani uDaniel Lacalle?
2.1 Usebenza phi uDaniel Lacalle?
2.2 Ufunde ntoni uDaniel Lacalle?
Iingcaciso ezingama-35 ezilungileyo zikaDaniel Lacalle
Kucacile ukuba kufuneka sifunde okuninzi ngokwenza iimpazamo kwaye sizifumanele izinto ezintsha. Nangona kunjalo, amabinzana kaDaniel Lacalle, kunye noochwephesha abaninzi abadumileyo, Banokusikhokela kancinci kwaye basincede siqonde ngcono ukuba umhlaba usebenza njani kwezoqoqosho. Ngesi sizathu siza kubonisa apha ngezantsi amabinzana angama-35 kaDaniel Lacalle:
"Ukuba unika injineli ixesha kunye nemali eyaneleyo, uyakufumana isisombululo."
"Ukuze uphumelele kufuneka ube nolwalamano olukhulu kunye nenkxaso evela kwiqabane lakho."
“Isizathu sokusilela okukhulu kobusoshiyali emhlabeni silula: abo bangazuziyo kwabo benzayo. Akukho zinkuthazo kwabo bazabalazayo, kwaye kukho imivuzo kwabo bathintela umsebenzi kunye noxanduva. Ukugqwesa akunikwa mvuzo, awuzange ufezekiswe, njengoko uninzi lutyhalela ezantsi. "
"Ukukhuthaza inkululeko yomntu kubaluleke ngakumbi ekuhlaleni kwaye kufanelekile kunokufuna ukucinezela isiqu sakho phambi kwezibonelelo zokuba ubunzima. Kuba umntu unenceba kwaye unesisa kunaleyo ithiwa ilawula iphinde yabela ubutyebi kwakhona. "
"Kuyakwenzeka ntoni ukuba iimoto zombane okanye zerhasi yendalo ziqala ukuthatha isabelo sentengiso kude kwiziphumo zeoyile? Ukutya oorhulumente ngokungathandabuzekiyo kuya kujonga iindlela zokutshintsha irhafu elahlekileyo kunye nezinye iirhafu zombane okanye igesi yendalo. "
“Ubungqongqo abuyithandi. Ubungqongqo bubuhlungu. Kodwa ukungabinamali kuyabacaphukisa abantu abaninzi, kwaye ixesha elide. "
Iinkqubo zongenelelo zihlala zicinga ngamahlwempu. Yiyo loo nto izigidi zazo zakha minyaka le. "
"Akukho nkululeko, ngaphandle kokuba kubekho inkululeko kwezoqoqosho."
"ISpain ithi ilawule amatyala. ULindsay Lohan uthi akalikhoboka. "
"Njengomtyali mali, umntu kufuneka azi ukuba akukho namnye kubaphathi benkampani, abahlalutyi bearhente okanye abathengisi abaya kuba neziphumo ezibi kwinqanaba lobungcali ngokunikezela uqikelelo olugqithisileyo."
“Umbane kufuneka ungabizi mali ingako, ube mninzi kwaye ufikeleleke. Ixabiso, ukufumaneka kunye nokuhamba ngokulula kunye nokugcinwa. Zonke ezinye ngamabali. "
"Umzi mveliso uhlala utyala imali kwinkolelo yobuxoki yokuba akekho omnye umntu oza kwenza le nto ayenzayo."
“Ukuba inye into icacile, kukuba umphanda wokugqibela weoyile awuyi kuxabisa izigidi zeedola. Iya kuxabisa zero. "
"Le ngxaki imbi kakhulu kunoqhawulo mtshato, ndilahlekelwe sisiqingatha semali yam kodwa nditshatile."
“Inzuzo, inzuzo kunye nenzuzo. Ezi ziintsika ezintathu zesicwangciso sam njengomtyali mali. "
“Ityala ngokwalo alilunganga. Ityala alilunganga xa lingavelisi mbuyekezo. "
"Iphepha lomncono, imali esebenzayo kunye nemali ziyithetha yonke loo nto, Daniyeli, kwaye ngokufunda ama-balance sheet uyakuqonda ukuba umhlaba uphambene."
"Bathembele kubani ngaphezulu, umntu ongcakazayo ngemali yakhe ahlalutye ubunyani okanye umntu ohlawulisayo - okanye ofumana iivoti - ngokuziguqula?"
“Yonke imimiselo emhlabeni ayizukubonelela ngenkcubeko kunye nengqondo. Kuya kufuneka uzazise, ​​ufunde. Ayonwabisi, kodwa kuphela kwendlela. Kwaye siza kuphazama ngamanye amaxesha. "
“Ityala sisiyobisi, bendiyiphinda-phinda yonke le ncwadi. Ibeka ixabiso lokuqonda, isenza sizive somelele, sinamandla, isenza ukuba sibone okwangoku ngombala oqaqambileyo kwaye ngakumbi kwikamva. Kwaye kuyinkohliso kuba ityala, njengeziyobisi, alikho enye into ngaphandle kobukhoboka ... "
“Namhlanje kukho ingcinga yezoqoqosho apho uMbuso lilungu elinezigqibo zoqoqosho ngokwemvelo ezinenjongo ezintle kwaye ke iimpazamo zalo kufuneka zixolelwe. Abangeneleli bayathemba ukuba uziva ubotshiwe, ukuba awusiboni esinye isisombululo kwaye wamkele ukuba ayikho enye indlela yokuphuma ngaphandle kokuzinikezela kwiimfuno zoorhulumente. "
“Umatshini wokushicilela ukhumbula kuphela iimarike xa izinto zingahambi kakuhle. Ngoba? Kuba sikwezoqoqosho apho urhwebo lwezemali ludelwa yingcamango. "
“Ngaphandle kwenkcubeko yezemali, inkohliso iyakuqhubeka ukuvela. Kubaluleke kakhulu ukuba uluntu ngokubanzi lufumane inkcubeko yezemali. Ukulila emva "kokucetyiswa kum" kubuhlungu, kodwa olona nyango lulungileyo lokungazi lulwazi: ukufunda kwaye ngaphezu kwako konke ukuqonda ukuba isiphoso asikho kwiimarike, kodwa ngabantu abangakwaziyo ukulawula iminqweno yabo, bayayithatha iingcebiso ezivela kubantu ekusenokwenzeka ukuba banoluvo oluncinci njengabo, okanye bayazivumela ukuba basiwe ziinkolelo eziphindaphindwe kwiminyaka edlulileyo yobomi. "
"Eyona nkohliso inkulu kule minyaka ilishumi idlulileyo ibikukubiza ukukhula oko ibikwelona tyala, kwaye le ikhoyo ngoku ukubiza ubungqongqo ngento engekhoyo ngaphandle kwenkunkuma."
"Yonke impumelelo encinci kufuneka ifunyenwe, kwaye ukufikelela kuzo zonke iinjongo kunzima kwaye kunzima."
“Inkululeko kwezoqoqosho yenze lukhulu ukunciphisa ubuhlwempu kunayo nayiphi na eminye imigaqo-nkqubo. Intlekele yokuqokelela izinto kwihlabathi ibonakalisile ukuba inkcitho iyodwa ikhokelela ekushoneni. "
"Ukuphuma kwingxaki enzulu, kuya kufuneka ukhuthaze inkululeko, wandise ingeniso elahlwayo kwaye ukhuthaze ukhuphiswano."
“Ndiyayithanda iSweden. Ihlabathi liphela kufuneka lifane neSweden. Bayakuthanda ukusela, ukhulule kwaye abantu bahle. Andikwazi ukucinga ngesizwe esingcono kulo mhlaba. "
"Xa isihogo kwagqitywa ekubeni ukuprinta imali ngumgaqo-nkqubo 'wentlalo'?"
"Yenza into oyifunayo ..., kodwa ngoxanduva olupheleleyo."
"Ukungalingani akuncitshiswa ngoncedo, kodwa ngenkuthazo yokudala ubutyebi."
“Nawuphi na umntu othathwa njengomntu ubhadlile kwaye unengcathu; ukuba uyinxalenye yesihlwele, ngoko nangoko uba sisikhohlakali. "
“Izisombululo zomlingo abazicebisa kuthi ngokuphindaphindiweyo ziyafana njengesiqhelo: thoba ixabiso, uprinte imali kwaye wenze uxolelo kumatyala. Hlwempuzeka uze usebenze amakhoboka. "
"Uqoqosho luyazitya ngokoqobo ngenxa yamatyala."
"Utat'omkhulu, owayenobungcathu kwimida, wayesoloko esithi: ulumke iindleko, uyayiqhela."
Ngubani uDaniel Lacalle?
Kwi-1967 i-protagonist yethu yazalelwa eMadrid: UDaniel Lacalle. Esi sazi ngezoqoqosho saseSpain saqala umsebenzi wakhe wotyalo-mali kunye nolawulo lweepotifoliyo eMelika. Wayeqhubeka eNgilane, ngakumbi eLondon, kubandakanya imali eyinkunzi, izinto eziluhlaza kunye nengeniso eguqukayo kunye nengeniso esisigxina. Kufuneka iqatshelwe ukuba ingenile ngevoti hayi ngaphezulu kwaye ingabi ngaphantsi kweminyaka emihlanu ilandelelana kwabathathu abaphambili kubaphathi be-Extel Survey, ekwinqanaba likaThomson Reuters. Apho wavotelwa kwezi ndidi zilandelayo: Umbane, iSicwangciso ngokubanzi kunye neoyile. Ke ngoko sinokucinga ukuba amabinzana kaDaniel Lacalle anolwazi lwangemvelaphi olubalulekileyo kunye namava.
Ngokubhekisele eSpain, apha kuyaziwa ngobukho bayo kumajelo eendaba ahlukeneyo. Kubo ukhusele kaninzi inkululeko yezoqoqosho. Ngokutsho kwakhe, ukufezekisa inkululeko kwezoqoqosho kunyanzelekile ukuba kuncitshiswe inkcitho yoluntu, ukuthengisa amacandelo abucala kunye nokunciphisa amandla kaRhulumente. Kwinqanaba loqoqosho, abagxeki babhekise kuDaniel Lacalle njenge "neoliberal" kunye "ne-ultra-liberal" amatyeli aliqela.
Esinye isizathu sokuba igama lakhe livakale ngathi kungenxa yobukho bakhe kwilizwe lezopolitiko. Ungumcebisi kwinto ekubhekiswa kuyo kumcimbi wezoqoqosho kaPablo Casado, owongamela i-PP. Ukongeza, uDaniel Lacalle wabandakanywa kwindawo yesine kuluhlu lwe-PP ukuze angene kunyulo kwiCongress of Deputies eyenzeka ngo-Epreli 2019. Nangona wonyulwa njengesekela, uLacalle warhoxa ukuqokelela imizuzu, Oko kuthetha ukuba usishiyile isihlalo sakhe. Ngokutsho kwakhe, wakwenza oko emva kokucingisisa malunga noku.
Iimpawu zikaPaul Krugman
Lo gqirha wezoqoqosho uyaziwa Ukubhala iincwadi ezininzi kwezoqoqosho, apho sinokufumana khona izimvo ezininzi, ukugxeka kunye neengcebiso kunamabinzana kaDaniel Lacalle. Nalu uluhlu lweencwadi zakhe:
"Uhambo oluya kwinkululeko yezoqoqosho"
"Umama Wazo Zonke Iimfazwe"
«La Gran Trampa» (kunye noJorge Paredes)
"Ibhodi emnyama kaDaniel Lacalle"
"Ukuthetha abantu bayaqonda"
Ngaphandle kwezi ncwadi zoqoqosho, uDaniel Lacalle naye ubhala ikholamu yonke imihla kwi El Confidencial. Ukongeza, uhlala esebenzisana namanye amajelo njenge 13TV, la BBC, la CNBC, El Mundo, Isibuko sikawonkewonke, Uqoqosho lwangaphakathi, Investment, Isizathu, Owesithandathu, UMgqabazi y The Wall Street Journal.
Usebenza phi uDaniel Lacalle?
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ndicacisa ukuba kutheni amabinzana kaDaniel Lacalle anokuba luncedo, le Madrilenian sisazi ngezoqoqosho kunye nomphathi wengxowa mali. Ngoku usebenza njenge Ingcali yezoQoqosho eTressis. Ukongeza, usebenza njengoprofesa kwi-IEB nakwi-IE Business School.
Ufunde ntoni uDaniel Lacalle?
Abantu abaninzi bayazibuza ukuba yintoni le wayeyifunda. Ewe, ukunika ixabiso nangakumbi kumabinzana kaDaniel Lacalle, kufuneka sigqamise umsebenzi wakhe wokufunda. Uye waphumelela izihloko ezininzi ebomini bakhe bonke:
I-Degree kwi-Economics kunye noLawulo lwezoShishino kwi-Autonomous University yaseMadrid
I-CIIA (Umhlalutyi oQinisekisiweyo woTyalo-mali lwaManye amazwe) isidanga somhlalutyi wezemali
INkosi kuPhando lwezoQoqosho (UCV)
I-postgraduate (PDD) evela kwi-IESE (iYunivesithi yaseNavarra)
Ngale nto sigqibezela ulwazi ngale ngcali yezoqoqosho. Ndiyathemba ukuba amabinzana kaDaniel Lacalle akukhuthazile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » UDaniel Lacalle Quotes
Ungazi njani ukuba ndikuluhlu olubi